ရုရှားနိုင်ငံ သတ္တုတွင်းမတော်တဆမှုကြောင့် လူ ၅၂ ဦး သေဆုံး - Xinhua News Agency
မော်စကို၊ နိုဝင်ဘာ ၂၆ ရက် (ဆင်ဟွာ)
ရုရှားနိုင်ငံ Kemerovo ဒေသရှိ ကျောက်မီးသွေးတွင်းတစ်ခုတွင် နိုဝင်ဘာ ၂၅ ရက်က မီးခိုးငွေ့များ ဖုံးလွှမ်းသွားပြီးနောက် ကယ်ဆယ်ရေးသမား ၆ ဦးအပါအဝင် လူပေါင်း ၅၂ ဦး သေဆုံးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ယင်းဖြစ်ရပ်မှာ ရုရှားနိုင်ငံ၌ ငါးနှစ်အတွင်း သေဆုံးမှုအများဆုံးလည်းဖြစ်သည်။ကနဦးအချက်အလက်များအရ Listvyazhnaya သတ္တုတွင်းတွင် အသက်ရှင်သူမရှိကြောင်း TASS က သတင်းဖော်ပြခဲ့ကြောင်း၊ သေဆုံးသူရုပ်အလောင်းအများစုမှာ မြေအောက်တွင် ရှိနေဆဲဖြစ်ကြောင်းနှင့် အပူချိန်နှင့် မီသိန်းပါဝင်မှု သတ်မှတ်ပမာဏရောက်ရှိချိန်တွင် မျက်နှာပြင်ပေါ်သို့ ဖော်ထုတ်နိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ကျောက်မီးသွေးမှုန်များ မီးရှို့သန့်စင်ပြီး မြေအောက်အနက် မီတာ ၂၅၀ တွင် မီးခိုးငွေ့များ ထွက်ပေါ်လာခဲ့ခြင်းကြောင့် မိုင်းတွင်းလုပ်သား ၁၁ ဦး သေဆုံးခဲ့ကြောင်း အစောပိုင်း၌ သတင်းဖော်ပြခဲ့သည်။
ဒေသခံအာဏာပိုင်များ၏ အဆိုအရ လူ ၃၈ ဦးအား ဆေးရုံသို့ပို့ဆောင်ခဲ့ပြီး ယင်းအနက် ၄ ဦးမှာ စိုးရိမ်ဖွယ်အခြေအနေတွင်ရှိကြောင်းနှင့် အခြားသူ ၁၃ ဦးမှာမူ ပြင်ပလူနာအဖြစ် ကုသမှုခံယူနေကြောင်း သိရသည်။
အခင်းဖြစ်ပွားချိန်၌ မြေအောက်၌ လူပေါင်း ၂၈၅ ဦးရှိနေခဲ့ပြီး ယင်းအနက် အများစုမှာ မိုင်းတွင်းပေါ်သို့ ဆွဲထုတ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ ဖြစ်ရပ်၌ သေဆုံးခဲ့သူများ၏ မိသားစုဝင်များထံ “အလွန်ကြေကွဲဝမ်းနည်းကြောင်း” ပြောကြားခဲ့သည်။ Kemerovo ဒေသအား နိုဝင်ဘာ ၁၆ ရက်မှ ၂၈ ရက်အထိ ကြေကွဲဝမ်းနည်းဖွယ်ရာနေ့ ၃ ရက် ကြေညာထားကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
Source: Xinhua| 2021-11-26 04:55:00|Editor: huaxia
MOSCOW, Nov. 25 (Xinhua) — A total of 52 people, including six rescuers, were killed after smoke occurred inacoal mine in Russia’s Kemerovo Region on Thursday.It was the most deadly mine accident in five years in the country.
According to preliminary data, there were no survivors in the Listvyazhnaya mine, TASS reported, adding that most of the bodies remain underground and will be raised to surface when temperature and methane concentration allow.
It was reported earlier that 11 miners were killed due to the ignition of coal dust in the ventilation and the ensuing smoke atadepth of 250 meters.
There were 285 people underground when the accident happened and most of them were lifted out of the mine.
Russian President Vladimir Putin expressed his “deepest condolences” to the families of the deceased. Kemerovo Region has announced three days of mourning from Friday to Sunday. Enditem
Photo : The headquarters of the Listvyazhnaya mine (photo by the Kemerovo Region-Kuzbass government)